‘म त्यो दिन ननिदाएको भए मेरो छोरा बाँच्थ्यो की ! बुवाले काठमाडौको कलेजमा छोडेको १७ वर्षका छोरा पोखरा फेवा तालमा मृ त भेटिए (भिडियो हेर्नुस्) – Taja Khawar
‘म त्यो दिन ननिदाएको भए मेरो छोरा बाँच्थ्यो की ! बुवाले काठमाडौको कलेजमा छोडेको १७ वर्षका छोरा पोखरा फेवा तालमा मृ त भेटिए (भिडियो हेर्नुस्)
प्रकाशित मिति: बिहिबार, जेठ ०६, २०७८ समय: ०:४२:५२
काठमाडौ । जवान छोराको रहस्यमय निधनले आमा बिचलित भएकी छन् । बुवाले नै अघिल्लो दिन कलेज लिएर गएका थिए । आमा पनि कलेज पढाउने । सेण्ट जेभियरवाट इन्टर पढेर भर्खरै ब्याचलर पढ्न थालेका छोराको अचानक निधनको खबरले आमा बिचलित भएकी हुन् । उनले छोराको निधन रहस्यमय भनेकी छन् । शव हेर्दा उनको शरिरमा देखिएका चिन्हले पनि त्यही पुष्टि गर्ने बताएकी छन् ।
उमेरले सानै भएपनि निकै सुझबुझ भएको आमाको भनाई छ । बुवाले कलेज छोडेको छोराको बारेमा अचानक पोखरावाट प्रहरीले मृ त भेटियो भनेर खबर आएपछि छक्क परेको बताइन् । अहिले छोराको मोवाइल हराएको छ । सरी म अहिले म बोल्न सकिदन, म पोखरामा छु । मेरो मोवाइलको पासवर्ड यो हो, आइएमईको पासवर्ड पनि यो हो भनेर छोराले पासवर्ड मात्र पठाएको बताइन् ।
Last Updated on: May 20th, 2021 at 12:42 am